သတိထားကာကွယ် အသည်းကင်ဆာ အန္တရာယ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဇူလိုင် 10, 2020 Charlie Laohapand, M.D.
အသည်းကင်ဆာ ( အသည်းဆဲလ်မှာ ဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ / အသည်းမှာအဓိကဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ) ရောဂါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာရောဂါတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်တဲ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေကြတဲ့ ကင်ဆာတွေထဲက အသေအပျောက်အများဆုံး ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာဟာ များသောအားဖြင့် အသည်းရောင် ဘီ ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ရတာကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
အသည်းရောင် ဘီ ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းက အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာစေဖို့ အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ မြင့်မားစေပါတယ်။ အသည်းခြောက်နေသူတစ်ယောက်မှာ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ဟာ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၈ ရာခိုင်နှုန်း အထိ နှစ်စဉ် တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကတော့ အသည်းရောင် စီ ပိုး ကူးစက် ခံရခြင်း၊ အရက်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အထူးအဖြစ်များနေတဲ့ အရက်ကြောင့် အသည်းခြောက်သွားခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာ ကို ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးနိုင်နေပြီလဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားကင်ဆာသိပ္ပံ ရဲ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရဆိုရင် အမျိုးသားများမှာ ၃၄% နဲ့ အမျိုးသမီးများမှာ ၁၃% ဖြစ်ပွားပြီး ယောက်ျား တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးနဲ့ မိန်းမတွေမှာ ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အသက်၄၀ နဲ့ ၇၀ ကြားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် အများစုမှာ ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေက သိပ်တိတိကျကျပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိပေမဲ့ ရောဂါပြန့်တဲ့နှုန်းကတော့ မြန်ပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နေပြီ လို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ ရောဂါက အမြင့်ဆုံး အဆင့်နီးပါးအထိ ကျွမ်းနေပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကျမှ ပေးရတဲ့ ကုသမှုတွေက ရောဂါအပေါ်မှာထိရောက်မှုမရှိတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါကို စောစောစီးစီး ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ ထိရောက်စွာ ကုသမှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများနဲ့ ကျန်းမာစေတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု အမူအကျင့်များက အသည်းကင်ဆာ မဖြစ်အောင် အသေအချာ ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. နာတာရှည် အသည်းရောင် ဘီ ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်း – ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေကြတဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါရဲ့ ခန့်မှန်ခြေ ၆၀% ဟာ အသည်းရောင် ဘီ ပိုး ကြောင့်ဖြစ် ပါတယ်။ လောလောဆယ် ထိုင်းမှာ ဒီရောဂါဖြစ်ပွါးနေသူ ၆ သန်းခန့်ရှိပါတယ်။ ဘီပိုး အကောင်ရေ အများဆုံး အရေအတွက်နဲ့ ရောဂါခံစားနေသူတွေဟာ အသည်းပိုမိုရောင်ရမ်းလာခြင်းနဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်းများ ဖြစ်လာ ပြီး အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေဟာ နှစ်စဉ် ၃ % မှ ၈% အထိ တိုးလာပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အသည်းရောင် ဘီ ပိုး ရှိနေပြီလို့ သိပြီးပြီဆိုရင် နှစ်စဉ် ပုံမှန် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသည်းခြောက်ခြင်း နဲ့ အသည်းကင်ဆာ အန္တရာယ်တို့ကို လျော့ချနိုင်ဖို့ ထိရောက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကုသဆေးများ အလွယ်တကူ ရရှိနေပြီဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အသည်းရောင် ဘီ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကလဲ ရောဂါ ရလွယ်စေတဲ့ လူတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ (ဆက်လက်လေ့လာရန် – https://www.samitivejhospitals.com/th/ไวรัสตับอักเสบใกล้ตัว/)
2. နာတာရှည် အသည်းရောင် စီ ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်း – စီ ပိုး ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အသည်းကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာကျတော့ အသည်းကင်ဆာအားလုံးရဲ့ ၁၀% ကနေ ၂၀% လောက်ပဲ စီပိုးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ကူးစက်ဖို့ အန္တရာယ်အမြင့်ဆုံး အုပ်စုတွေမှာကတော့ မူးယစ်ဆေး သွေးကြောထဲ ထိုးထည့်သုံးစွဲသူ၊ ၁၉၈၉ နှစ်မတိုင်ခင်က သွေးသွင်းကုသဖူးသူများ နဲ့ အသည်းရောင် စီပိုးကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်ချေ မြင့်မားစေတဲ့ တက်တူးထိုးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးထိုးအပ် အတူတူ ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းစတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိသူများ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နာတာရှည် စီ ပိုးရောဂါ မှ အသည်း နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အသည်း တစ်ရှုးများ ထူပြီး ကြပ်ခဲလာရာမှတစ်ဆင့် အသည်းခြောက်တဲ့ အဆင့်ရောက်ကာ နောက်ဆုံးအသည်းရဲ့လုပ်ငန်းများကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပျက်စီးစေမဲ့ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အသည်းရောင် စီပိုးရှိနေပြီလို့ သိတာနဲ့ အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုတွေကို ထပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ အစွမ်းထက်တဲ့ သောက်ဆေးတွေလည်း ရှိနေပြီဖြစ်လို့ အသည်းရောင်စီ ရောဂါကို ကုသဖို့နဲ့အတူ အသည်းကင်ဆာ အန္တရာယ်ကိုပါ လျှော့ချနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ (ဆက်လက်လေ့လာရန် –https://www.samitivejhospitals.com/th/ไวรัสตับอักเสบบีและซี/)
3. အခြားအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်း – အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရက်ကြောင့်အသည်းခြောက်ခြင်း နဲ့ အရက်ကြောင့် မဟုတ်တဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်း ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ အလားအလာရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ အသည်းရောင်ရမ်းမှု၊ အသည်းမာကျွတ်လာမှု နဲ့ အသည်းခြောက်မှုများကြောင့် တက်လာတဲ့ အသည်းအင်ဇိုင်း(AST,ALT) များဟာ သာမာန်ထက် များစွာမြင့်မားနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကျဆင်းလာပြီ ဆိုရင်တော့ လူနာဟာ မျက်လုံးဝါခြင်း၊ ရေဖျဉ်းစွဲပြီးဗိုက်ပူခြင်း၊ အသည်းပျက်လို့ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ယိုယွင်းမှုနဲ့ နောက်ဆုံး အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများလာခြင်းတို့ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီလို အန္တရာယ်ရှိအုပ်စုများအနေနဲ့ အသည်းကင်ဆာ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှုဖြစ်တဲ့ အာလ်ထရာဆောင်းစစ်ဆေးမှုကို ၆လတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ အရက်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါနဲ့ အသည်းဆဲလ်တွင်း အဆီများ စုဝေးအိုင်ထွန်း နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောင်ရောဂါတွေကိုလည်း ပိုမို အတွေ့ရများလာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်စေတဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလမ်းကြောင်းတွေကတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပြီး အထိုင်များတဲ့ နေထိုင်မှုစနစ်ပုံစံများ၊ ကယ်လိုရီများတဲ့ အစာများစားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီအချက် အားလုံးက အသည်းခြောက်ခြင်းနဲ့ အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေဖို့ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ (ဆက်လက်လေ့လာရန် – https://www.samitivejhospitals.com/th/ปาร์ตี้_ไขมันพอกตับ/).
4. အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ စောစောပိုင်းလက္ခဏာ ဖြစ်တဲ့ အသည်း မာပြီးခဲနေတဲ့ အဆင့်မှာ ရောဂါလက္ခဏာ ဟာ မရှိသလောက် ဒါမှမဟုတ် တိတိကျကျမဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Fibroscan လို့ခေါ်တဲ့ အသည်း မာကြောတောင့်တင်းမှုကို တိုင်းတာချက်တစ်ခု ဟာ လူနာကို တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီး အသည်းရောင် ဘီနဲ့ စီရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေကို အသည်း ထဲက အသားစနမူနာ ထုတ်မကြည့်ဘဲ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နိုင်တာမို့ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ Fibroscan နည်းလမ်းက ရောဂါကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်ကိုက် ကုသမှုပေးနိုင်ဖို့ နဲ့ အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါစတာတွေကို ဖေါ်ထုတ်စစ်ဆေးဖို့ များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ (ဆက်လက်လေ့လာရန် – https://www.samitivejhospitals.com/th/เสี่ยงไขมันพอกตับ/).
Hepatocellular Carcinoma လို့ခေါ်တဲ့ အဖြစ်အများဆုံးအသည်းကင်ဆာအတွက်ကုသချက်များ
1. ခွဲစိတ်ကုသခြင်း – အသည်းကင်ဆာအတွက်ရောဂါကုသဖို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး လို့ ပထမဆုံး စဉ်းစားတဲ့ ကုသချက် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာရဲ့ အသည်းဟာ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေပြီး ကင်ဆာအရွယ်ဟာလည်း ၅ စင်တီမီတာထက် သေးနေရမယ့်အပြင် အနီးနားက သွေးကြောတွေကလည်း ထိခိုက်မှုရှိမနေသေးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှသာ ခွဲစိတ်မှုရဲ့ အကျိုးကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. အသည်းအစားထိုးကုသခြင်း – အသည်းခြောက်နေတာပါတွဲပြီး ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက်ဆိုရင် ဒီကုသမှုကို စဉ်းစားပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာရော အသည်းခြောက်တာကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကုသမှုပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကင်ဆာ အရွယ်အစားသေးပြီး အနီးအနားက ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများထိ မပြန့်ပွားသေးတဲ့ လူနာများကိုသာ အသည်းအစားထိုး ကုသပေးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကင်ဆာ အရွယ်အစားကြီးလေလေ ကုသမှုနောက်ပိုင်း ရောဂါ ပြန်ဖြစ်ပွားဖို့ ရာခိုင်နှုံးများလေလေဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းက ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုဖြစ်သော်ငြားလည်း အလှူရှင်ရှားပါမှု ၊ ကုန်ကျစားရိတ်ကြီးမှုတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီကုသမှု ကို ရွေးချယ်ဖို့ အကန့်အသတ်ကတော့ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ဆူခွန်ဗစ်ဆေးရုံကြီးဟာ အသည်းအစားထိုးကုသပေးရာဗဟိုဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသည်း အစားထိုး ကုသမှုအဖွဲ့မှာ အသည်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ အသည်းကုသမှုပါရဂူ၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သူနာပြုများ အပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီ ဆေးရုံကြီး ဟာ အသည်းအစားထိုးကုသမှု ခံယူနိုင်မယ့် သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ လူနာများအတွက် အသည်း အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းလိုအပ်ချက်များနဲ့ ပြည့်မီတဲ့ ဆေးရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
3. ရေဒီယို ကြိမ်နှုန်းမြင့်လှိုင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဖျက်ဆီးပြီးကုသမှုပေးခြင်း (RFA) – ရေဒီယို ကြိမ်နှုန်းမြင့် လှိုင်းများကို သုံးပြီး အပူစွမ်းအင်တစ်ခုကို ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဖျက်ဆီး ပစ်တဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ဖို့ သုံးပါတယ်။ ၃ စင်တီမီတာထက် ငယ်ပြီး အဓိကသွေးကြောများနှင့်ကောင်းစွာ လွတ်ကင်းသည့် ကင်ဆာများကို ကုသဖို့အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
4. အသည်းကင်ဆာကလာပ်စည်းများအပေါ် ဆေးဖြန်းကုသခြင်း သို့မဟုတ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ဖြန်း ကုသခြင်း (TACE or TARE) – ဒီကုသမှုမှာ chemo ခေါ် ဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် Radio nuclide ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို ကင်ဆာကြိတ်အတွင်း တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သတ်ပစ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့အတူ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ သွေးကြောတွေထဲကို သွေးခဲများနှင့် ပိတ်စေခြင်း ဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်တွေရဲ့ အဟာရထောက်ပံ့မှုကို လျော့ကျစေတဲ့နည်းလမ်းများပါဝင်ပါတယ်။ TACE/TARE ကုသမှုကို ကင်ဆာအရွယ်အစားကြီးမားလို့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးသော နည်းလမ်းများ အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ သူများ၊ ကင်ဆာကျိတ်က အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းအချို့နဲ့ နီးကပ်စွာရှိနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုဟာ လူနာအတွက် အန္တရာယ်များတယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့ အချိန်များမှာ သုံးပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူနာရဲ့ အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်များ ဟာ ဒီ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ် အတွက် လုံလောက်မှု ရှိအောင် ကောင်းနေဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုသမှုကြောင့် တချို့နေရာတွေ မှာ သွေးအထောက်အပံ့လျော့နည်းသွားမှုက အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တဒင်္ဂ ထိခိုက်စေမှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ TACE/TARE ကုသမှု နှစ်ခုစလုံးက လူနာ အသက်ပိုရှည်စေဖို့ အတွက်တော့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။
5. ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်း – ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ ကုသမှုအားလုံးနှင့် အဆင်မပြေရင်တော့ အဲဒီလူနာကို ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းဖြင့်ကုသဖို့ တစ်နည်းကျန်ပါသေးတယ်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှုမှာ ကင်ဆာဆဲလ် တွေကို တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားပြီး ခီမိုဆေးသွင်းကုသခြင်း(Targeted chemotherapy) နှင့် ရောဂါပြီးမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုတို့ကို ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့်ကုသခြင်း (Immunotherapy) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ ဆေးပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီနည်းနဲ့ကုသဖို့ ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် လူနာတစ်ဦးချင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် အသေအချာစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ခုအချိန်မှာ အသည်းကင်ဆာကုသမှုအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိနေပြီဖြစ်လို့ ကင်ဆာအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ သော်လည်းကောင်း၊ ကင်ဆာအရွယ်အစားနဲ့ အသည်းရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း သင့်တော်မယ့်ကုသမှုတွေကို ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။ လူနာများနဲ့ ဆရာဝန်များဟာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ့် ကုသမှုကို မရွေးခင် ကုသမှုတစ်ခုခြင်းစီကို အတူတကွ စဉ်းစားတိုင်ပင်သုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ခုခေတ် အသည်းဆဲလ် ကင်ဆာကုသမှုများဟာ ယခင်ကထက် ပိုမိုတိုးတက် ထိရောက်မှုလည်း ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာကို ရောဂါရဲ့ အစောဆုံး ကာလမှာ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ယခုအချိန်မှာ လုံးဝပျောက်ကင်းစေတဲ့အထိ ကုသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်အမြင့်ဆုံးအုပ်စုထဲက လူများကို ပုံရိပ်ဖေါ်စက်ဖြင့်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်း Ultrasound ပုံမှန် လုပ်ခြင်းဖြင့်အသည်းကင်ဆာကို စောင့်ကြည့်တဲ့ စနစ်ဟာ လွန်စွာအရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါမရှိသူများအနေနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်တဲ့ အနေအထိုင် ၊ အစားအသောက် ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း စတာတွေကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရင်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုကို နှစ်စဉ်ပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အသည်းကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး လုပ်ရမှာတွေကတော့ အသည်းကင်ဆာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေကို လျော့ချခြင်း၊ အသည်းရောင် ဘီ နဲ့ စီရောဂါပိုးများကို ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း၊ အရက်သောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို သင့်တင့်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့ မဖြစ်မနေလိုအပ်မယ့် ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးထားခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သတိထားကာကွယ် အသည်းကင်ဆာ အန္တရာယ် အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကတော့ အသည်းရောင် စီ ပိုး ကူးစက် ခံရခြင်း၊ အရက်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အထူးအဖြစ်များနေတဲ့ အရက်ကြောင့် အသည်းခြောက်သွားခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။